सूर्यको सिंह राशिको गोचर अनुसार भदौँ महिना तपाईंको लागि कस्तो रहला ? जान्नुहोस् ।, According to the sign of Leo in the Sun, what will be the month of Bhadra for you? Know | Mero Jyotish
सूर्यको सिंह राशिको गोचरले विभिन्न राशिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
सूर्य ग्रह आत्मा, सरकार, अधिकार, शक्ति, अहंकार, आत्म-सम्मान, गर्व आदि को कारक हो। यसको वैदिक ज्योतिष र मानव जीवनमा ठूलो महत्त्व छ। सूर्य ग्रह भदौँ महिनाभरि सिंह राशिमा रहनेछ। आउनुहोस् जानौं कि सूर्य ग्रह सिंह राशिमा रहँदा कुन-कुन राशिलाई कस्तो-कस्तो प्रभाव पर्छ ?
सूर्य मेष राशिबाट पाँचौं घरमा गोचर हुनेछ। सूर्यको यो गोचरले मिश्रित परिणाम दिन्छ। यसले शैक्षिक र बौद्धिक उत्कृष्टता बढाउनेछ। छात्रवृत्ति खोज्ने विद्यार्थीहरूले यस अवधिमा यसलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। तपाईंको रचनात्मकता बढ्नेछ र यसको माध्यमबाट तपाईं नयाँ योजनाको विकास गर्न र यसलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, जसले तपाईंलाई समृद्धि, लोकप्रियता र नाफा मिल्दछ। तपाईंको सामाजिक स्थिति र कार्यस्थल सम्बन्ध सुधार हुनेछ। केही व्यक्तिलाई जागिरमा परिवर्तनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। रोजगार खोज्नेहरूले नयाँ अवसर पाउनेछन् । यो समय व्यक्तिगत र प्रेम सम्बन्धको लागि उपयुक्त छैन। तपाईं क्रोध र अहंकारले समस्या उत्पन्न हुनेछ। झूटा धारणामा बाँच्नुभन्दा कुरा स्पष्ट गर्नु राम्रो हो। समय स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट राम्रो छ र तपाईंको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्नेछ।
सूर्य वृष राशिबाट चौथो स्थान वा राशिमा हुनेछ। यो वृष राशिको मानिसका लागि चुनौतीपूर्ण समय हो। परिवार र कामका बीच सन्तुलन कायम गर्न समस्या पर्ला। मानसिक दबाबले बेचैनी हुन सक्छ, जसले तपाईंको निद्रामा समस्या हुन सक्छ । अनावश्यक विवाद परिवारमा आउन सक्छ। आमाको स्वास्थ्यमा समस्या हुनुका साथै आफुलाई पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। यो समय तपाईंको आत्मविश्वासमा कमि आउन सक्छ। सम्पत्ती किन्न चाहनेहरूका लागि यो राम्रो अवसर हुनेछ। यो समय प्रेम सम्बन्धमा रहेकाहरुले आपसी विवादबाट बच्नुपर्नेछ। अन्य क्षेत्र सामान्य रहन सक्छ।
भदौँ महिनाभर सूर्य मिथुन राशिबाट तेश्रो स्थानमा रहनेछ । यो सूर्यको गोचर मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि राम्रो रहन सक्छ । आफ्नो साहस र बहादुरीले काम वा व्यवसायको क्षेत्र मजबुत हुनेछ। एक भन्दा बढी अवसरहरू प्राप्त हुने सम्भावना छ, जसले भविष्यमा लाभको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो मेहेनत गरेर सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। तपाईंको व्यावसायिक जीवनमा परिवर्तनहरू सम्भव छ। विद्यार्थीले पढाई तथा परिक्षामा राम्रो परिणाम पाउन सक्छन्। कामको कारण यात्राको सम्भावना छ तर यात्रामा समस्या हुन सक्छ। तपाईं र तपाईंको अधीनस्थहरू बीच बारम्बार असहमतिको संभावना छ, त्यसैले सावधान हुनुहोस् र तपाईंको अहंकार र क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्।
सूर्य भदौँ महिनाभरि तपाईंको राशिबाट दोश्रो भावमा रहनेछ। यो गोचरले तपाईंलाइ कार्यस्थलमा उर्जा र उत्साह दिन्छ। तपाईं पैसा बचतमा ध्यान दिनुहुन्छ। त्यहाँ पदोन्नति वा तलब वृद्धि को राम्रो संभावनाहरु छन्। तपाईंको आधिकारिक प्रकृतिले तपाईंलाई नेतृत्व गुणहरू दिनेछ। यदि तपाइँले तपाइँको मातहतबाट निराशाको सामना गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूसँग व्यवहार गर्दा कठोर शब्दहरू त्याग्न प्रयास गर्नुहोस् र भविष्यमा अझ राम्रो गर्न उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस्। तपाईं अधिक पैसा कमाउन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरूमा पैसा लगानी गर्न प्रयास गर्नुहुनेछ। तपाईंको झूटा गर्वले तपाईंलाई कठिन परिस्थितिमा लैजान सक्छ। पूर्वज सम्पत्तीले झगडा र तर्कहरू गराउन सक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ । तपाईको राम्रो सम्बन्धका लागि तपाईले आफ्नो पार्टनरको भावनाहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
सूर्य तपाईंको राशिमा आउँदैछ। यो समयमा तपाईंको नेतृत्व कौशल सुधार हुनेछ। कडा इच्छा शक्तिले तपाइँको व्यावसायिक जीवनमा सफलता ल्याउँछ। तपाईं न्याय पक्षमा रहनुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो प्रतिभाले सबैलाई प्रभावित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् जसले तिनीहरूलाई सफलताको सही मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। यो प्रेम सम्बन्ध शुरू गर्नको लागी एक राम्रो समय हो। राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरूले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछन्। परिवारमा अहंकारले झगडा हुन सक्छ, त्यसैले कृपया बोल्नु अघि सोच्नुहोस्, किनकि कठोर शब्दहरूले तपाईंलाई तपाईंको प्रियजनबाट टाढा पार्छ। तपाईंको ध्यान वृद्धि, लाभ र इच्छाको पूर्तिमा हुनेछ र तपाईं धन संचय र दीर्घकालीन लगानीमा लाग्न सक्नुहुनेछ।
सूर्य तपाईंको राशिबाट बाह्रौं भावमा आउँदैछ। बहुराष्ट्रीय कम्पनीमा काम गर्ने वा निर्यात व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको लागि यो सूर्यको गोचर अनुकूल हुनेछ, जसले उनीहरूलाई उनीहरूको पेशामा मद्दत गर्दछ। काम आफ्नो महत्व प्रमाणित गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने र अप्रत्याशित चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो पेशागत यात्राको राम्रो सम्भावनाहरू छन् जसले तपाईंको काममा बढावा दिन्छ। खर्च गर्दा सावधान हुनु पर्छ, अनावश्यक खर्चले आर्थिक समस्या आउन सक्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुको लागि राम्रो समय छ । तपाईंको बन्धन प्रेम जीवनको लागि बलियो हुनेछ, विवाहित व्यक्ति बीच झगडा र मतभेदको सम्भावना हुन सक्छ। कानूनी मुद्दाहरूबाट बच्न नियम र कानूनको पालना गर्नुहोस्। अप्रत्याशित परिस्थितिबाट बच्नको लागि तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्।
सूर्य तपाईंको राशिबाट एघारौं भावमा आउँदैछ। यो तुला राशिको लागि धेरै अनुकूल गोचर हो। यस समयमा उनीहरूको सपना साकार हुन सक्छन्। पदोन्नति प्राप्त गर्ने राम्रो सम्भावनाहरू छन् जसले आर्थिक लाभ र सामाजिक स्थितिमा वृद्धि प्रदान गर्दछ। तपाइँ एक पटकमा एक भन्दा बढी कार्यमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। समग्रमा, यो कामको दृष्टिले राम्रो समय हो तर व्यर्थ तपाईंको घमण्डले सबै लाभको हानि गर्न सक्दछ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्। यो लगानीको लागि राम्रो समय होजसले भविष्यमा फलदायी परिणाम दिन्छ। शेयर बजार जस्ता जोखिमपूर्ण लगानीले तपाईंलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। यस अवधिमा तपाईं आफन्तहरूबाट आर्थिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धको लागि गाह्रो समय रहेको छ, यदि तपाईं आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो अहंकारलाई अलग राख्नुहोस्।
वृश्चिक राशिबाट सूर्यको परिवर्तन दशौं घरमा भइरहेको छ। सूर्यको गोचरले तपाईंलाई एक शक्तिशाली स्थिति प्रदान गर्दछ । तपाईंले आधिकारिक पदहरूमा नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसको कारणले तपाईंले आर्थिक लाभहरू पाउनुहुनेछ र तपाईंको सामाजिक स्थिति बढ्नेछ। राजनीतिमा रुचि राख्ने मानिसहरूले पनि यस क्षेत्रमा स्थान बनाउने मौका पाउने छन्। यदि तपाईं सरकारी काम वा कुनै आधिकारिक पोष्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं तिनीहरूको प्रस्ताव पत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यवसायिक व्यक्तिहरूले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा आफ्नो पुरानो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दछन्। तपाईं यो समयमा एक बलियो व्यक्तित्वका साथ उठ्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन सन्तुलित गर्न कोशिस गर्नुहुनेछ, तर तपाईं कामको अधिकताको कारण आफ्नो परिवारलाई उचितसमय दिन सक्नुहुन्न। तपाईंको पति या पत्नीले तपाईंलाई आर्थिक लाभमा पनि मद्दत गर्न सक्दन्। तपाईंको बौद्धिक क्षमता बढ्नेछ र तपाईं केहि नयाँ कुरा सिक्न इच्छुक हुनुहुनेछ।
सूर्यको गोचर तपाईंको राशिबाट नवौं राशिमा भइरहेको छ। यस समयमा धनु राशिका व्यक्ति धेरै सावधान हुनु आवश्यक छ। तपाईं परिचित व्यक्तिद्वारा धोकामा पर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले विचार नगरी अरुको सल्लाहको अनुसरण नगर्नुहोस्। अरुलाई आफ्नो कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि रहस्यको खुलासा नगर्नुहोस्। अहिले गरेको मेहेनतले केहि समय राम्रो परिणाम दिन सक्ने भएकाले काममा उचित मेहेनत गर्नुपर्छ। यदि तपाईं आफ्नो काम परिवर्तन गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यो समय उत्तम छ । तपाईं लामो यात्राको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। यो आध्यात्मिक विकासको लागि राम्रो समय हो। तपाईंको धर्मप्रति आकर्षण बढ्नेछ र अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूले यस गोचरबाट फाइदा लिन सक्नेछन्। बुबाको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुपर्छ। प्रेम जीवनको लागि राम्रो समय छ। जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध बलियो हुनेछ।
सूर्य मकर राशिबाट आठौं घरमा गोचर हुनेछ तपाईंले यस गोचरको समयमा धेरै चुनौतिहरू र अवरोधहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। कामको क्षेत्रमा परिवर्तनको राम्रो मौका छ, त्यसैले निर्णय लिँदा सावधान रहनुहोस्। यस अवधिमा खर्चहरू अधिक हुनेछन्, त्यसैले यस समयमा सामान्य रूपमा खर्च गर्न निश्चित गर्नुहोस्। आत्मविश्वास स्तर धेरै कम हुनेछ, अनावश्यक चीजहरूका कारण तपाईं स्थिर डरमा हुनुहुनेछ। केही व्यक्तिको अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धले उनीहरूको समस्या बढाउन सक्छ। यो प्रेम सम्बन्धहरुको लागि एक राम्रो समय हो। तपाईंको सासू-ससुरा पक्षको साथ बहस हुन सक्छ। बोल्दा ध्यानपूर्वक शब्दहरू छनौट गर्नुहोस्। तपाईंको नकरात्मक प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्नुहोस् र यस गोचरको खराब प्रभावहरूबाट आफूलाई जोगाउन ध्यान दिनुहोस्।
सूर्य कुम्भ राशिबाट सातौं घरमा गोचर हुनेछ, यसको परिणाम स्वरूप तपाईंले मिश्रित परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। सूर्यको स्थितिले तपाईंलाई तर्कशील बनाएर तपाईंको ठूला व्यक्तिसँग विवाद पर्न सक्छ, जसले तपाईंमा तनाव पैदा गर्न सक्छ। तपाईंको विरोधीहरू यो अवधिमा तपाईं भन्दा उच्च स्थितिमा हुन सक्छन्। यो समयमा तपाईंको काममा सफलताको लागि कडा मेहेनत गर्नुपर्नेछ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि उचित ध्यान दिनुपर्नेछ किनकि यो समयमा खर्च बढ्न सक्छ र आम्दानी पनि सामान्य रहन सक्छ। प्रेम तथा वैवाहिक जीवनमा असमझदारी वा अनावश्यक विवाद आउन सक्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्छ।
सूर्य मीन राशिबाट छैटौं घरमा गोचर हुनेछ, जसको परिणाम स्वरूप परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूको सफलताको राम्रो सम्भावना हुन्छ। तपाईं आफ्नो कडा परिश्रमका साथ सफल परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो गोचरले धेरै अवसरहरू ल्याउँदछ। समाजमा तपाईंको स्थिति सुधार हुनेछ। सूर्यले धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र मीन राशिको मौलिक गुणलाई अगाडि ल्याउनेछ। यदि तपाई व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईंले कडा परिश्रमको फाइदा पक्कै पाउनुहुनेछ। तपाईंले वैवाहिक जीवनमा शान्तिमय सम्बन्ध कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। यो समय स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट धेरै सकारात्मक छैन। उच्च रक्तचाप वा आँखा सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ, त्यसैले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्।